Nintendo gburu Super Mario na onye ọsọ a maka gam akporo | Gam akporosis
Nintendo gburu Super Mario na onye ọsọ a maka gam akporo
Francisco Ruiz | | Egwuregwu gam akporo, Nyocha, Super Mario Run
Mgbe ike wụnye ma nwalee Super Mario Run maka gam akporo, Nke m na-agwa gị na ọ dịghị mfe ma ọlị! Ugbu a enwere m ike ịkwado ma kwenye okwu ahụ m ji dee isiokwu a, nke ahụ bụkwa n'ezie "Nintendo gburu Super Mario ya na onye ọgba ọsọ gam akporo a".
Ikekwe mụ onwe m enwela mmechuihu site n'inwe atụmanya dị elu etinye na egwuregwu ọhụrụ a maka gam akporo, egwuregwu egwuregwu nke egwuregwu egwuregwu vidio na akụkọ ifo ezi ndụ nke rutere ọhụrụ ma gbanwee na nsụgharị ya dị iche iche emelitere maka Nintendo Wii-U ma ọ bụ maka Nintendo obere consoles, nke o doro anya na, m na uche na onye echiche, enwebeghị ike izute mkpa nke ndị ọrụ nke egwuregwu n'ihi na gam akporo mobile ngwaọrụ. Nke ukwuu nke mere na maka m na dị ka m na-agwa gị na m na-akọwa n'okpuru: "Nintendo egbuola Super Mario na onye ọsọ a maka gam akporo".
Ekwesiri ighota na dika m na akowa na vidio a na etinye na ahapuru m gi n’elu akara ndia na mbido post, na nka abughi ihe obula ma obu olu nke onye Achọrọ m ime banyere agwa egwuregwu vidio a dị egwu nke gosipụtara ihe karịrị otu ọgbọ na ụzọ ya.
Achọrọ m mesie agwa nke egwuregwu vidio ebe ọ bụ na maka m, okwesighi ịgwọ Super Mario Run dị ka egwuregwu vidiyo maka gam akporo kemgbe. ha wepụrụ anwansi niile na isi nke egwuregwu Super Mario Bros mbụ, anwansi ka ha bibiri ruo mgbe ha kpochapụrụ kpamkpam na nkeji nke a nke gam akporo bụ ụdị egwuregwu ma ọ bụ egwuregwu gbadoro ụkwụ maka obere ụlọ ahụ.
Mgbe m kwuru maka obere ụlọ a, m na-ekwu maka ndị na-ege ihe dị ka afọ asaa ma ọ bụ asatọ kachasị, nke ahụ ga-arụ naanị mmegharị abụọ anyị nwere ike ịme na egwuregwu gam akporo a, mmegharị nke ịwụli site na ịpị na ihuenyo ahụ ma ọ bụ na-awụlikwa elu site na ịgbatị pịa, achọghị nhịahụ dị ukwuu iji kwuo ma.
Na nkenke Super Mario Run maka gam akporo aburula ezigbo egwuregwu umuaka nke a na - ewepụ ndị nwere ike igwu egwuregwu vidio maka gam akporo na etiti ahụ na - ahụghị egwuregwu dị oke mma nke ọ na - ejedebe ịme ụdị agba abụọ dị iche iche na ịnwa ịnweta mkpụrụ ego niile na - apụta ma ọ bụ na ha zoo agbụrụ anyị.
Ihe kachasị njọ na ihe na-enye m nsogbu bụ, ọ bụ maka Kpochapu ndị iro kacha nta ma ọ bụ na-awụkarị mfe, na Super Mario Run maka gam akporo a na-eme ha na akpaghị aka site na injin egwuregwu vidiyo n'onwe ya. Nke a bụ ihe, na mgbakwunye na iwepụ ihe isi ike na ịma mma nke egwuregwu ahụ, na-ahapụ ya n'okpuru miri emi nke abis, na-ewepụ ihe egwuregwu niile enwere ike na ya yana, na nkenke, na-ewepụ ikike ọ bụla mara mma nke ọ nwere banyere m n'anya tupu m rie ma ọ bụ nụ ụtọ achicha egwuregwu a.
Maka Inri karịa, na mgbakwunye na chọrọ njikọ permanentntanetị na-adịgide adịgide inwe ike igwu egwu Super Mario Run maka gam akporo, nke yiri ka ọ ga-egbu m na ọ nweghị nhọrọ na-anọghị n'ịntanetị, ndị ọrụ nwere ọnụ ahịa gbanyere mkpọrọgwụ ma ọ bụ gbanwee na Roms dị ka LinageOS ma ọ bụ Cyanogenmod ha agaghị enwe ike ibudata egwuregwu ahụ na eze site na'slọ Ahịa Play nke Google ebe ọ bụ na, ma ọ bụ ọbụnadị na a ga-egosi ya na nsonaazụ ọchụchọ nke Storelọ Ahịa Play, ma ọ bụ ọ bụrụ na egosiri gị ya, ị ga-enweta ọkwa ahụ na-adịghị mma na njedebe gị enweghị dakọtara na egwuregwu a.
Anyị nwere ike ịgbalị mgbe niile Direct download na nwụnye nke ngwa ma ọ bụ na aghụghọ zoo mgbọrọgwụ, nke m nwere ike iji obi sie gị ike na kwa ụbọchị siri ike inweta ọ dịkarịa ala na egwuregwu Nintendo na Niantic.
Na nkenke, nnukwu ihe nwute na ụlọ ọrụ ndị otu mba na ihe Nintendo nwere, mee nke a Egwuregwu egwuregwu Android nke ọtụtụ ndị na-eso ụzọ plum na-ewu ewu na-aga ịdọkpụ ntutu ha ozugbo ha nwara ya.
Maka ihe a niile na maka ihe niile m gwara gị ma kọwaa na vidiyo na m hapụrụ gị n'isi nke isiokwu a, echere m n'onwe m na Nintendo egbuola Super Mario ya na onye ọsọ a maka gam akporo.
Ọ bụrụ na ị ka chọrọ ịnwale egwuregwu Super Mario Run maka gam akporo na njedebe gị bụ otu n'ime dakọtara ahụ, m ga-ahapụrụ gị njikọ njikọta na Storelọ Ahịa Play maka ibudata ma wụnye Super Mario Run maka gam akporo.
Download Super Mario Run maka gam akporo n'efu na Storelọ Ahịa Google
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Nintendo gburu Super Mario na onye ọsọ a maka gam akporo
Ardany Holon dijo
M na-eche ma na-eche otu ihe ahụ.
Zaghachi Ardany Jolón
Jorge 5555 dijo
Na-arụ ọrụ na Lineage OS (na-enweghị mgbọrọgwụ)
Duru nke Sarria Vidal dijo
M na manuganu 1 na 2 na-anọ puku ugboro
Zaghachi Dulfary Sarria Vidal
Luis Kevin dijo
Emela nne, etinyego m ha ka nwa m nwoke kpọọ ma na mberede ị ga-akwụ ụgwọ ... Ptm
Zaghachi Luis Kevin
Jekọb Velarde dijo
You na-arụ ọrụ n'efu?
Zaghachi Jacob Velarde
Amaara m na ọ bụ azụmahịa
Ọ masịrị m ịkpọ manuganu otu puku ugboro
Enrique Fajardo dijo
Ederede gị na-egbu edemede gị.
[…] Kedu nke pụtara, n'echiche m na echiche onwe m […] Na ị na-ekwusi ike na ihe niile bụ echiche onwe onye. Are karịrị oke. Lezie anya ederede gị ma ọ bụrụ na ị ga-emepụta edemede.
Banyere egwuregwu. Ọ dịghị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ. Ọ bụ eziokwu na ọ dị mfe, mana kedụ ihe dị njọ n'ịmepụta ihe nkịtị ka igbu oge, dịka ọmụmaatụ, ịnọ n'ime ime ụlọ ịwụ? Kedu ka ị ga - esi mepụta "anwansi" nke Mario - usoro ikpo okwu - nke ị kwuru, na ihuenyo mmetụ? Anwansi a na-achọkarị ka agba ọsọ na ịwụ elu bụrụ onye ọ bụla na mgbe ụfọdụ a na-eji ya n'otu oge, yabụ otu bọtịnụ iji mepụta ọrụ abụọ ahụ abụghị ezigbo echiche. Echere m na ị nwere ike ịnwa ịmegharị ihe a niile na ihuenyo mmetụ, mana na ahụmịhe gara aga dịka ọmụmaatụ, igwu Megaman na emulator maka ngwaọrụ mkpanaka, ọ gaghị adị mma ma zie ezi. Ọzọkwa, ọ bụ onye na-agba ọsọ. Ọ bụrụ na e nwere D-Pad iji chịkwaa Mario, ọ gaghị abụrịrị ụdị a.
Ekwenyere m na gị na ọ dị oke njọ na ị ga-enwe njikọ internetntanetị igwu egwu. Na nke ahụ, Nintendo mere mkpebi na ọtụtụ ndị enweghị isi - mana ọ ga-enwe ihe kpatara ya, m chere - n'ihi na ọ nwere ike ịpụ apụ ma ọ bụrụ na enwere ike ịkpọ ya n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla ịchọrọ, maka ịdị mfe nke egwuregwu ahụ. Echefula na ka egwuregwu zuru ezu, ị ga-akwụ ụgwọ.
Temple Run, Spiderman Unlimited, Subway Surfers, Sonic Dash. Ihe dị iche na nke a bụ na ị ga-eji swipe kama ịpị ma ọ bụ jiri gyroscope. Mario Run dị mfe, mana ọ bụghị n'ihi nke ahụ ka e gburu maka inwe mmetụ abụọ. Ọ dịghị amasị gị na ọ bara ezigbo uru. Enweela m ya, mana echeghị m na m ga-etinye oge dị ukwuu na ya. Emechaa m ga-ewepụ ya.
Zaghachi Enrique Fajardo
Ndewo. atụfu mkpụrụ ego pink ka hahaha ... ¬¬
Ihe ọzọ, enwere m Xiaomi Redmi Rịba ama 4, gbanyere mkpọrọgwụ, enwekwara m ike ịwụnye ya nwayọ site na ụlọ ahịa egwu, ọ gwaghị m ihe ọ bụla gbasara enweghị nkwekọrịta ... Ka anyị hụ ma ọ bụrụ na onye ọzọ nwere nsogbu ...
Ugboro abụọ dijo
Etinyere m ya na enweghị nsogbu na ọnụ ya na cyano na mgbọrọgwụ, yabụ amaghị m ma edere isiokwu a na-enweghị ntọala ma ọ bụ naanị iji dọta uche, n'eziokwu na ọ bụ egwuregwu dị mfe mana ... Ma? Echere m, nnukwu egwuregwu egwuregwu nke Nintendo na-ere bụ naanị na ... Site na njikwa, ọ na-enye gị egwuregwu ekwentị nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụmahịa na usoro ịkwụ ụgwọ na-akwụghị ụgwọ ma ị rịọ maka otu mma ahụ? Lezienụ USD $ 60 ahụ nke ọzọ dị mkpa, ị ga-enwerịrị njirisi iji mee edemede, ọ jọgburu onwe ya iche na ị ga-ahụ ihe nkiri pixar ma iwe were gị n'ihi na ọ dịchaghị mma dị ka Gump Gump. dị mma ma na ọnọdụ na ọkwa dị iche iche, ọ dị mma ka ị mesie ya ike na ọ bụ naanị echiche gị n'ihi na dịka onye na-akatọ egwuregwu ị na-asọpụrụ nke ukwuu, enwere egwuregwu ndị ka mma n'efu? N'ezie enwere egwuregwu Mario ka mma? O doro anya na egwuregwu a gburu Mario? (Echere m, m mechara nwee agwa a ruo n'ókè na ọ gaghị ere ọzọ, dị ka Sonic Boom dịka ọmụmaatụ?) Naanị oge ga-agwa, mana enwere m obi abụọ.
Israel Moreno dijo
A bit dị egwu. Nwere ike ịmasị, enweghị mmasị, ma ọ bụ tozuo ma gosipụta njehie, dịka njikọ na-adịgide adịgide na ịntanetị. Ma "gbuo Super Mario" ... O nweela egwuregwu dị egwu ma nwee ya n'ọdịnihu.
Zaghachi Israel Moreno
Kevin Alejandro VG dijo
N'otu aka ahụ, ha ga-enwe mmasị na mbọ ha mere bụ ịzụlite ya, ọ naghị adị mfe ịme, ọ na-ewe oge ha na agụụ nke ga-enwerịrị iji mezuo ya.
Ya mere na n'ikpeazụ ị na-enye ya n'efu mbọ niile ị nyere (?
Zaghachi Kevin Alejandro VG
"HA" gburu, biko ...
Gam akporo Uruguay dijo
Ekwenyere m na 100% n'echiche a ... enweghị obi eziokwu.
Zaghachi gam akporo Uruguay
Alberto Bustillos Garcia dijo
Aha ya dị oke egwu na ọ na-egbu edemede ahụ. Nintendo adịghị -na H- gburu Mario: ọ bụ nanị nyere a belatara ahụmahụ na-emegharị ka mobiles. Ozugbo ha hapụrụ egwuregwu Mario ọhụrụ maka Nintendo consoles, ha ga-ere ha dị ka hotcakes, onye dere edemede ahụ maara 100% ya.
Ya mere mba, egbughi ya, n’eziokwu o meela ka ọ bịarukwuo ndị na-ege ya ntị nso (Amaara m ọtụtụ ndị na-egwu Super Mario na nke mbụ ya maka Run). N'ezie, ọ bụ ihe Nintendo na-eme na egwuregwu mkpanaka ha na-ahapụ: na-eweta ikike ha nye ndị ọhụụ ọhụrụ.
Zaghachi Alberto Bustillos García
Ngwa kacha mma ịdekọ ihuenyo gam akporo gị n'efu
Blackberry ana achi achi nzuzo gị na Nzuzo Nzuzo